ရေခဲသေတ္တာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China ရေခဲသေတ္တာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူများ
ရိုးဖြောင့်သော ရုပ်ထွက် ရေခဲသေတ္တာ
Back Bar ရေခဲသေတ္တာ
Countertop Display ရေခဲသေတ္တာ
Multideck Display ရေခဲသေတ္တာ
Deli Display ရေခဲသေတ္တာ
မတ်မတ် မျက်နှာပြင် ရေခဲသေတ္တာ
Chest Freezer ကိုပြသပါ။
ရေခဲမုန့် ရုပ်ထွက် ရေခဲသေတ္တာ
Counter Freezer အောက်မှာ
1. မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လေအေးပေးထားသော ကွန်ဒင်ဆာအမျိုးအစား၊ မြင့်မားသော အပူဖလှယ်နိုင်မှု၊ ပါဝါကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်း။
2. အလယ်အလတ်/မြင့်မားသောအပူချိန်၊ နိမ့်သောအပူချိန်၊ အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
3. ရေခဲသေတ္တာ R22၊ R134a၊ R404a၊ R507a အတွက် သင့်တော်သည်
4. ပုံမှန်အတင်းအကျပ်လေအေးပေးထားသော condensing ယူနစ်၏ စံသတ်မှတ်ချက်- ကွန်ပရက်ဆာ၊ ဆီဖိအားသက်သာခွင့် အဆို့ရှင် (တစ်ပိုင်း hermetic recips စီးရီးများမှ လွဲ၍)၊ လေအေးပေးသည့် ကွန်ဒင်ဆာ၊ စတော့ခ်ဖြေရှင်းချက်ကိရိယာ၊ အခြောက်ခံသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ၊ တူရိယာဘောင်၊ b5.2 ရေခဲသေတ္တာဆီ၊ အကာအကွယ် ဓာတ်ငွေ့; bipolar စက်တွင် intercooler ပါရှိသည်။
1. အမျိုးအစား-ရေခဲသေတ္တာ အစိတ်အပိုင်းများ
3. အသုံးပြုမှု- ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေခဲသေတ္တာ
4. သံမဏိဝါယာကြိုးအချင်း: 3.0-4.0mm
5. အရွယ်အစား: 2.5 လက်မ
6. လျှောက်လွှာ - ရင်ဘတ်ရေခဲသေတ္တာ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ သံမဏိပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဖြောင့်စက်အေးစက်
2. ပိတ်ခြင်းဖြင့် Manual/automatic defrost လုပ်ပါ။
3. အချိန်/အပူချိန်။ defrost ကိုအဆုံးသတ်ရန်သတ်မှတ်ခြင်း။
5. Relay အထွက် : 1HP (ကွန်ပရက်ဆာ)
1. R134a ကိုအသုံးပြုခြင်း။
2. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူသေးငယ်ပြီးအလင်း, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် reciprocating ကိရိယာမပါဘဲ
3. အနိမ့်ဆူညံသံ၊ မြင့်မားသောအအေးပေးနိုင်စွမ်းနှင့်ပါဝါစားသုံးမှုနည်းပါးသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
4. ကြေးနီအလူမီနီယမ် bundy ပြွန်
5. start start capacitor ဖြင့်
6. တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး 15 နှစ်တွင်ရောက်ရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်သည်။
1. အရိပ်-ဝင်ရိုးစွန်းပန်ကာမော်တာ၏ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာ -25°C~+50°C ၊ insulation class သည် class B ဖြစ်သည်၊ protection grade သည် IP42 ဖြစ်ပြီး၊ condenser များ၊ evaporator နှင့် အခြားသော equipment များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုထားသည်။
2. မော်တာတစ်ခုစီတွင် မြေညီလိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
3. အထွက်အား 10W မှုတ်ပါက မော်တာတွင် impedance ကာကွယ်မှုရှိပြီး အထွက် 10W ထက်ပိုပါက မော်တာကို ကာကွယ်ရန် အပူကာကွယ်ရေး (130°C ~ 140°C) တပ်ဆင်ထားပါသည်။
4. အဆုံးအဖုံးပေါ်တွင်ဝက်အူအပေါက်များရှိသည်; ကွင်းပိတ်တပ်ဆင်ခြင်း; ဇယားကွက် installaton; အနားကွပ်တပ်ဆင်ခြင်း; သင့်တောင်းဆိုမှုအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ရေခဲမုန့် မျက်နှာပြင် ရေခဲသေတ္တာ
ဆိုက်မြေပုံ| © မူပိုင်ခွင့် - 2016 - 2021 NENWELL ရေခဲသေတ္တာ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Hot Products များ : ရေခဲသေတ္တာ ထုတ်ကုန်များ | Countertop ရေခဲသေတ္တာ | Glass Front ရေခဲသေတ္တာ | ရေခဲမုန့် Showcase ကိတ်မုန့် Showcase | စူပါမားကတ်ရှိုးကေ့စ် | လုပ်ငန်းသုံးအအေးပေးစက်များ | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရေခဲသေတ္တာ | ဇီဝဆေးရေခဲသေတ္တာ